Shina novolavolaina sy fanodinam-by vy nandrindra | Derunying
Taratasy vy mifangaro vy
fampiharana: Ho an'ny singa milina mazava tsara
Ity karazana vokatra ity dia namboarina tamin'ny fomba fandrobohana mafana ihany koa, fa rehefa avy ivelan'ny tanky dia hafana avy hatrany hatramin'ny 500 ℃ hananganana sarimihetsika zinc sy vy manify. Ity ravin-tsavily ity dia manana fihenjana sy fanamafisana tsara.
Ny tsipika famokarana nandrisika tamin'ny alàlan'ny fizotran'ny famokarana vy any Etazonia indrindra, ny tena famaritana ny vokatra dia 0.15-1.5mm * 800 ~ 1250mm. Ny tsipika famokarana dia miaraka amin'ny taratry ny lafaoro maharitra maharitra maharitra; fantsom-panafody karazana fantsom-panafody fampidiran-drivotra fanamafisam-peo; antsy an-habaka efatra; milina maivana; milina manitsy sy fitaovana mandroso hafa, nanao ny asan'ny mpisava lalana izahay miaraka amin'ny teknolojia patanty: fitaovana fampiasana hafanana fako, izay hamonjy angovo be dia be ary hiaro ny tontolo iainana.
Ny sosona metaly zinc sy vy dia miforona ao anaty firakotra iray manontolo amin'ny alàlan'ny fitsaboana hafanana amin'ny tsipika vy mandalo ny ranon-tsakafo mandro. Ny firakotra dia toa fotsy mainty tsy misy famirapiratan'ny metaly. Mora ny vovoka mandritra ny fizotran'ny famolavolana herisetra. Izy io dia azo ampiharina amin'ny sarona izay azo nolokoana tsy misy fitsaboana hafa ankoatry ny fanadiovana ankapobeny.
Ny isa ny vy firafitry ny firafitra dia asehon'ny tarehimarika arabo sy ny marika singa simika mahazatra. Tarehimarika arabo roa no ampiasaina hanehoana ny atin'ny karbaona (x / 10000) sy ny toerana eo an-dohan'ny kilasy. The
Ny atin'ny singa mampifangaro dia aseho toy izao manaraka izao: Rehefa latsaky ny 1,50% ny atiny antonony, dia manondro ny singa fotsiny ny isa isa ary amin'ny ankapobeny tsy maneho ny atiny; Rehefa 1,50% ～ 2.49% ny salan'isa antonony, 2.50% ～ 3.49%, 3.50% ～ 4.49%, 4,50% ～ 5.49%, 2, 3, 4 ary 5 dia soratana manaraka ireo singa mpampifangaro. Ohatra: Ny salan'isan'ny carbon, chromium, manganese ary silikonin'ny vy vita amin'ny firafitra dia 0,30%, 0,95%, 0,85% ary 1.05%. Rehefa ny atin'ny S sy P dia -0.035%, ny naoty dia manondro ny "30CrMnSi". Ny vy vita amin'ny firafitry ny firafitra avo lenta (atin'ny S sy P ≤0.025%) dia aseho amin'ny fampidirana "A" amin'ny isa. Ohatra: "30CrMnSiA". Ny vy metaly manara-penitra avo lenta (S≤0.015%, P≤0.025%) dia aseho amin'ny fanampiana ny "E" amin'ny naoty. Ohatra: "30CrM nSiE". Ny naoty vy vy firafitra manokana dia hanampy ny marika manondro ny tanjon'ny vokatra ao amin'ny Tabilao 1 mankany amin'ny lohany (na rambo). Ohatra, ny ambaratongan'ny vy 30CrMnSi ho an'ny visy riveting dia aseho ho ML30CrMnSi. 2. Ny fomba fisoloan'ny sokajy vy vita amin'ny firaka dia mitovy amin'ny vy firafitra. Ohatra: Ny salan'isan'ny karbaona, silikika ary manganese dia 0,60%, 1,75% ary 0,75% amin'ny vy lohataona ary ny naoty dia aseho ho "60Si2Mn". Ho an'ny vy lohataona avo lenta, ny marika "A" dia ampidirina amin'ny isa ary ny naoty dia aseho ho "60Si2MnA".
Previous: Takelaka vy mandroboka mafana
Manaraka: Coating karazana-PE